Mitahiry fahavaratra manerana ny trano fandraisam-bahinin'i Korinto eran-tany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Mitahiry fahavaratra manerana ny trano fandraisam-bahinin'i Korinto eran-tany
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Hotels & Resorts • Vaovao Momba ny Hongria • Vaovao Mafana Malta • Vaovao • Vaovao Mafana Portugal • Vaovao Mafana Rosia • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK
Ny trano fandraisam-bahiny any Corinto eran'izao tontolo izao dia manolotra tahiry fahavaratra be ho an'ireo vahiny manoratra ao amin'ny iray amin'ireo fananana be kintana sy dimy kintana ao Corinto.
Ny trano fandraisam-bahiny any Corinto eran'izao tontolo izao dia manolotra tahiry fahavaratra be ho an'ireo vahiny izay manoratra ao amin'ny iray amin'ireo fananana kintana sy kintana dimy ananan'i korosiana mandritra ny volana vitsivitsy.
Mijanona ao amin'ireo fananana afovoan-tanàna ao Lisbon, Budapest, St. Petersburg, ny sainam-pirenenan'i Londres, na ireo trano fandraisam-bahiny Korintoana roa, any amin'ny nosy Malta, ny masoandro Mediteraneana, ary mitahiry 20% -30% amin'ny tahiry ao anaty kitapo. Ireo fifampiraharahana ireo dia mitondra fiandrasana tara-masoandro manjary ao anaty tetibola.
Corinthia Hotel London: 25% ny efitrano, efitrano ary trano fandraisam-bahiny ho an'ny fijanonana hatramin'ny 16 septambra 2018. Anisan'izany ny fahazoana maimaimpoana ny fiainana ESPA nahazo loka tany Korinto, fahazoana 24 ora mankany amin'ny gym BodySPace, Wi-Fi, gazety sy VAT isan'andro.
Corinthia Hotel Budapest: Mihena 25% raha mijanona mandritra ny telo andro farafahakeliny alohan'ny 25 Desambra 2018. Anisan'izany ny fidirana amin'ny hotely Royal Spa ho an'ny efitrano Deluxe sy sokajy avo kokoa ary Wi-Fi fanampiny.
Corinthia Hotel Lisbon: Fihenam-bidy 20% amin'ny famandrihana alohan'ny 31 Aogositra 2018, raha mijanona hatramin'ny 31 Desambra 2018. Ahitana fihenam-bidy amin'ny efitrano ihany sy ny tahan'ny B & B, Wi-Fi maimaim-poana, fihenam-bidy 10% amin'ny fitsaboana spa rehetra, fampiasana pisinina sy gym.
Petersia Hotel St. Petersburg: Mihena 20% raha toa ka famandrihana farafahakeliny 30 andro mialoha ny fijanonana hatramin'ny 31 Desambra 2018. Ahitana fidirana an-tsokosoko 24 ora maimaimpoana amin'ny gym miaraka amin'ny fitaovana sauna sy kardio ary Wi-Fi maimaim-poana.
Corinthia Palace Hotel & Spa, Malta: 30% off rehefa mamandrika alohan'ny 27 Aogositra 2018, raha mijanona hatramin'ny 31 martsa 2019. Ahitana bisy fahalalam-pomba mankany / avy any St. Julian's, Sliema, Golf Club, Valletta, fampiasana ireo fotodrafitrasa Athenaeum Spa, ao anatin'izany ny pisinina anaty trano, ny tobim-pahasalamana , sauna sy zaridaina.
Hotel Corinto St. George's Bay, Malta: fihenam-bidy hatramin'ny 30% amin'ny famandrihana alohan'ny 27 Aogositra 2018, ho an'ny fijanonana hatramin'ny 30 Aogositra 2019. Ahitana fihenam-bidy amin'ny efitrano ihany sy ny tahan'ny B & B, Wi-Fi maimaim-poana, fizahana tara hatramin'ny 3 hariva, fihenam-bidy 10% amin'ny Air Sidina Malta.